Bacda iska caabbinta ilmaha, Beyin xirxirida, warshad bacda baakadaha ee Shiinaha
Boorsada xashiishadda jiinyeer ee jilicsan ee caagga ah
Boorsada siibaydhka boorsada caabbinta carruurta waxay umuuqataa mid aad u qurux badan, oo farshaxan ah. Kaliya si aan u helno boorsadan jiinyeerka ah, waxaan u baahanahay inaan dalbanno jiinyeer gaar ah, sidoo kalena waxaan u baahan nahay inaan ku dhejino isbarbar bacda gacanta. Taasi waxay ku bixin doontaa waqti iyo lacag badan. Laakiin runtii way u qalantaa taas.
Bacda iska caabinta ee caado u daabacan Custom
Waxaan sameynay cabirro badan oo kala duwan oo ah boorsooyin qanjaruufo, qaar waa boorsooyin yaryar, dadku si toos ah ayey alaabtooda u gelin doonaan. Halka macaamiisha qaarkood ay jecel yihiin inay sameeyaan bac weyn oo qanjaruufo, sida 9 `` X12 '', oo ah bac wax lagu iibsado. Waxay bacda dhigan doonaan bakhaar, marka uu jiro iibsade qaata xoogaa boorsooyin yaryar oo kala duwan ah, waxay ku ridi doonaan dhammaan boorsooyinka yar yar boorsadan weyn ee wax iibsiga, waxayna ku shaabadayn doonaan sida dowladdu u baahan tahay.
Bacda xashiishka cunugga iska caabbinta
Double zipper waa nooc ka mid ah jiinyeer gaar ah oo carruurta ka ilaalin kara wax soo saarka ku jira bacaha, waxaa jira furitaan been abuur ah oo ku yaal dhabarka boorsooyinka, haddii aad rabto inaad furto bacaha, waxay u baahan tahay inaad jiido lakabka hore iyo lakabka dambe isla waqtigaas , Haddii kale lama furi karo.Waxay caan ku tahay bacaha xashiishka.